Feno 55 taona ny Petit séminaire Saint Paul Androranga eto amin'ny Diosezin'ny Toamasina. Nankalazaina androany alahady faha 27 jiona izany izay notarihin'ny Son Éminence Cardinal Désiré TSARAHAZANA. Tonga nanome voninahitra izany ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, ny Prefet ary ny Ben'ny Tanànan'i Toamasina Renivohitra. Nisy ihany koa fanolorana vary sy menaka ho fanohanana ny Seminera zandriny. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 21 juin 2021 12:17
Fampianarana teny anglisy : Misy misoloky ny ambasady amerikana eto Madagasikara sy Kaomoro
Nanao fampitandremana amin'ny endrika fisolokiana ny ambasady amerikana eto Madagasikara sy Kaomoro. Nambaran’ity farany fa mahalala ny fisiana fikambanana mitonona ho miara-miasa akaiky amin'ny ambasady amerikana amin'ny fampianarana teny anglisy, ary mampanantena mari-pahaizana atolotry ny ambasady amerikana. « Tsy mitombona velively izany », hoy ny ambasady. « Tianay ny mampahafantatra ny besinimaro fa, na dia miasa ho an'ny fampiroboroboana ny teny anglisy, sy manao ho laharampahamehana ny fampianarana teny anglisy aza izahay, dia tsy miara-miasa amina ivontoerana mampianatra teny anglisy sandaina vola », hoy hatrany ny fanazavana. Mampirisika anao izahay hitafa aminay, hoy ny fanabaràna, raha mila fanazavana fanampiny mahakasika ireo hetsiky ny ambasady eto Madagasikara.
Vita ary notokanana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Mahajanga. Atsoina hoe « Akory Haly» izy ity, izay natao ho fanohanana sy fanomezan-danja ny kolontsaina. Ahitana efitrano fanaovana fampisehoana na fijerena horonan-tsary misy toerana 550 nomena ny anarana hoe : "Oadraha" ilay fotodrafitrasa. Ahitana efitrano fampiratina, toeram-pamakiam-boky, efitrano ho an’ny mpanao gazety, efitrano fanaovana informatika sy efitrano fiofanana. Misy ihany ka fitaovana fanamafisam-peo sy zava-maneno. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 30 mai 2021 12:57
Ambohimanga Rova : Doany roa rotiky ny afo
Nitrangana haintrano eny Mahazaza, Kaominina Ambohimanga Rova, Distrika Antananarivo Avaradrano ny atoandron’ny sabotsy 29 mey 2021. Lasibatry ny afo tamin’izany ny fasan'Andriana sady Doany eny an-toerana. Nifanome tanana namono ny afo ny mponina sy ny Polisy, Zandary, Tafika ary ny mpamonjy voina avy amin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Tsy nisy ny fitohanan’ny fifamoivoizana ka nalaky tonga ireto farany. Nanome fiara nitaterana rano ihany koa ny tsara sitrapo teny an-toerana. Fotoana fohy dia voafehy ny afo.
vendredi, 21 mai 2021 20:09
“Ny Fanahy Fahamarinana no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra” (Jo 13, 20) Ho an’ny mpino katolika manerana ny NosyHo an’ny vahoaka malagasy sy ny tsara sitrapo rehetra, Homba anareo anie ny Fiadanana! Ry havana,Hafaliana ho anay Evekan’i Madagasikara ny nihaona tamin’ny alalan’ny « vidéoconférence », nifampizara vaovao sy nifampidinidinika. Isaorana Andriamanitra fa mafy orina ny finoantsika na dia eo aza ny fitsapana manohintohina ny fiainana ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Amin’izao Pantekôty 2021 izao dia tianay Raiamandreninareo ny mitondra hafatra amin’ny maha-dimbin’ny Apostoly anay, manohy ny iraka nankinina amin’ny Eglizy Reny, sady Mpampianatra no Mpaminany.
dimanche, 16 mai 2021 18:46
Teatra Malagasy : Nodimandry i Ravaloson Milijaona na i Lija
Misaona ny teatra malagasy. Nodimandry ny marainan’ny alahady 16 may 2021 i Ravaloson Milijaona na i Lija. Nanao fanambarana fampahafantarana ny fahafatesan’ity mpilalao teatra malagasy ity ny Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy na FMTM, toy izany koa ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina. Mpamorona tantara ihany koa i Lija, ary ny feo beso no tena nampiavaka azy tamin'ny hira fandravahana ny tantara. Rahalahin’i Ravaloson Mbato i Lija ary samy mpilalao teatra mpikambana ao amin'ny Tropy Jeannette izy ireo. Tropy teatraly niorina tamin’ny 1929 ny Tropy Jeannette, ary vao avy nankalaza an-tsehatra ny faha-90 taonany ny 2019. (Jereo Sary Tohiny)